ဆီးရီးယားအပါအဝင် စစ်ဒဏ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ခံရတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေဘဝကို အိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ စာမဲ့ကာတွန်း ဖြစ်ပါတယ်
ပုံကို အင်တာနက်မှ ကူးယူပါတယ်
" သေချာတာတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့
ယမ်းနံ့တွေတလူလူ ဗုံးကျည်ဆန်အထပ်ထပ်တွေကြားထဲ အမေပျောက်ရှာဖူးကြလိမ့်မယ် မထင်ဘူး "
* မြေဇာပင်တို့ရဲ့ တမ်းချင်း *
ဘယ်သူသေသေ မာနိုင်တဲ့ ငတေတစ်စုရဲ့ အမိန့်အောက်မှာ
အောက်ခြေနင်းပြားတွေ အဖိခံရ အနှိပ်ခံရ
သံလွင်တစ်ခက် အရေးပါ ဆိုပြီး လက်နက်သံတွေ ညံခဲ့တာ
ငြိမ်း ချမ်း ရေး တဲ့လားကွယ်
" စစ် " ဆိုတဲ့ စကား မကြားပါရစေနဲ့လို့ သူတို့ .....
ခပ်ဟဟပွင့်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက အစာအဟာရကို တောင်းခံနေသလား .....
" ဥမမယ် စာမမြောက်သေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ခိုနားရာ ရင်ခွင်က ဟောဒီ အေးစက် မဲမှောင်လှတဲ့ ဗုံးခိုကျင်းကြီးပဲလား ? "
" ကျွန်တော်တုိ့ တခြားဘာမှ မတောင်းဆိုပါဘူး
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကိုပဲ ပြန်ပေးပါ "
" မေမေ့ကို ခေါ်လို့မရတော့ဘူး ...."
" ဖေဖေ့ကို ပြန်ရှာပေးပါ ........."
မျက်ဝန်းထဲက စကားသံတွေက အသံမထွက်နိုင်ပေမယ့် ခံစားချက်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ကောင်းကောင်း ဘာသာပြန်နိုင်တယ်လေ
ဒီလိုနဲ့ပဲ မြေဇာပင်တွေခမျာမှာ ..........
Posted by မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂) at 12:15 PM0comments
Labels: ခံစားချက် စာစုလေးများ
“ ဆရာ ... ”
“ အင်း ... ပြော ဆေးချိတ်ထားတာ ကုန်သွားလို့လား ... ဘီးလုံးလေးကို အောက်ဆုံးထိ အရင်ချထားလိုက်နော် .. ဒါလေးပြီးရင် လာခဲ့မယ် ”
“ မဟုတ်ဘူး ဆရာ ”
ဆေးပုလင်းချိတ်ရန် ဆေးထိုးအပ်ကြီးတစ်ချောင်းဖြင့် ကျွန်တော်လည်း အလုပ်ရှုပ်နေသည်မို့ လူနာရှင်ကို လှည့် မကြည့် အား။ ပြောရခက်နေသည့် ပုံဖြင့် ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ရပ်နေသေးသော လူကြီးကား ကျွန်တော့်လှည့် အကြည့် ကို စောင့်နေပုံ။
“ ဒီလိုပါဆရာ ... ကလေးကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ခေါ်သွားချင်လို့ ”
“ ခေါ်သွားမလို့ ဆိုတာ .. ဘယ်ကိုလဲ ... အိမ်ကိုလား ”
“ ဟုတ်တယ် ဆရာ ဆက်မထားချင်တော့လို့ ”
“ ဆက်မထားချင်တော့ဘူးဆိုတာက ... ဆေးဆက်မကုတော့ဘူးလား ”
ကလေးက ရွာမှာ အရပ်လက်သည်နှင့် မွေးထုတ်ထားပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်း ဗိုက်ကြီးပူလာမှပဲ သိတော့တာပါ ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာ နကန်းမသိတဲ့ အမေ။ မွေးပြီးတော့လည်း ကာကွယ်ဆေးတွေ မထိုးထား ထိုးရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေမှ အသက် တစ်နှစ်နဲ့ နှစ်လလောက် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကလေး။ သည်တော့ကာ သည်လိုကလေးမျိုးမှ ရောဂါပိုးတို့ အကြိုက်မတွေ့လျှင်တော့ဖြင့် ငါးကြော်မကြိုက်တဲ့ ကြောင်မိုက်ဖြစ်မှာပေါ့။ အခုကလည်း ကလေးက ဆေးရုံကို အဖျားနဲ့ တက်ပြီး ရောက်လာတာ။ အရင်းစစ်ကြည့် တော့ အမြစ်မြေက ဆိုသလို။ ရာဇဝင်ကိုလိုက်လိုက်တာနဲ့ risk များတဲ့ ကလေး။ လိုအပ်တာတွေ စစ်ဆေးပြီးနောက် အဖြေက ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်တယ်။
“ အဘက ဘာတော်တာလဲ ”
“ အဖိုးပါ ”
“ အဖိုးက ဘာဖြစ်လို့ အိမ်ပြန်ခေါ်သွားမှာလဲ .... ဘယ်သူနဲ့ပြဖို့ စဉ်းစားထားတာလဲ ”
“ ကျွန်တော် ရွာက မြန်မာဆေးဆရာနဲ့ပဲ ကုချင်တယ် ဆရာ ”
သက်ပြင်းခိုးတစ်ခုကို ချလိုက်ရင်း ကျွန်တော် ရင်ထဲမှာ စိတ်မကောင်းခြင်းတွေ ကြီးစိုးသွားတယ်။
“ ဒီလိုရှိတယ် အဘ .... အခု ကလေးက ဦးနှောက်အမြှေးရောင်တဲ့ပိုးကြောင့် ခုလို တက်ပြီးဖျားနေတာ ... ဒါ အန္တရယ်ရှိတယ် စိုးရိမ်ရတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် တခါ ရှင်းပြတယ်နော် ”
အဖိုးဖြစ်သူရဲ့  မျက်လုံးထဲက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုအရောင်တွေ ကျွန်တော်တွေ့ နေရတယ်။
“ အခု ကလေးက ဆေးရုံတက်နေတာလည်း ဒီနေ့နဲ့ဆိုမှ နှစ်ရက်ပဲ ရှိသေးတယ် ဟုတ်တယ်နော် အဘ။ တစ်ရက် နှစ်ရက်နဲ့တော့ ရောဂါကို ဥုံဖွဆိုပြီး ပျောက်အောင် လုပ်လို့မရဘူး။ အခုဆိုရင် ကလေးက စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေရတဲ့ အခြေအနေမှာပဲ ရှိသေးတယ်။ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို သုံးလေးလလည်း ဖြစ်နိုင်သလို လေးငါးလလည်း ဆေးရုံမှာ ကုသရမယ့် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာအောင်ပဲ လုပ်လို့ရသေးတယ်။ ရောဂါပိုးကို ပျောက်အောင် ကုဖို့ဆိုတာ လိုကိုလိုအပ်တယ်။ ”
အဖိုးဖြစ်သူ မျက်နှာမှာ တဖြည်းဖြည်း ခံစားချက်မဲ့လာတာကို သူ ပြောရင်း အကဲခတ်နေမိတယ်။
“ ခုချိန်မှာ ကလေးက ကုလို့ရနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေပါ ... ဒီတော့ အဘတို့ စဉ်းစားပါ ... ဒီလို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဆရာဝန် ဆရာမတွေ ကြီးကြပ်နေတဲ့ ဆေးရုံမှာ ကုမလား။ အဘ ပြောတဲ့ ဗိန္ဒောဆရာနဲ့ပဲ ကုမှာလား ဆိုတာကတော့ အဘ သဘောပါ။ ”
အဖိုးဖြစ်သူရဲ့  မျက်နှာမှာ တွေဝေဒွိဟမှုတွေ စိုးရိမ်သောကတွေနဲ့ မွန်းကြပ်နေပုံရတယ်။ ကျွန်တော်က ဆက်ပြီးတော့ .
“ အဘ သိထားဖို့က ကလေးက သူခံစားနေရတာကို မပြောနိုင်ဘူး မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ အဘတို့ကပဲ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်။ အဘတို့က လက်မခံပဲနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က အတင်းအကြပ် ဆေးကုသဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ အဘ စဉ်းစားပါဦးလို့ပဲ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ ကလေးဆိုတာမျိုးက နားလည်နိုင် ပြောနိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး မရှိပါဘူး။ အဘတို့လို တတ်သိနားလည်တဲ့ လူကြီးတွေကပဲ ကလေးနေရာကနေပြီး ကလေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ စဉ်းစားပါဦး။ ကလေးရဲ့  ကံတရားက အဘတို့လက်ထဲမှာပါ”
ပြောစရာစကားလည်း ကုန်သွားပြီမို့ ကျွန်တော်လည်း လုပ်လက်စများဆက်လုပ်နေလိုက်တယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ ဆရာ ”
ကျွန်တော့်ကို တိုက်ရိုက်ပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ သူ့ဘာသာ တီးတိုးရေရွတ်ပြီး ကျွန်တော့်နားမှ ခပ်ရို့ ရို့  ထွက်သွားသော အဖိုးအိုရဲ့  နောက်ကျောကိုကြည့် ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ကျွန်တော် သက်ပြင်းချမိပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ မှာတော့ ......
“ ဆရာမရေ ... ဟို Meningitis ကလေးလေးကို ဆေးရုံမှာ မရှိတဲ့ဆေးတွေ ဝယ်ခိုင်းမနေပါနဲ့တော့ Ward Fan ထဲကပဲ ခဏစိုက်ပေးထားလိုက်ပါဦး ”
“ အမယ်လေး .... ဆရာရယ် ... ဆရာကသာ တွေးပူနေ အဲ့မိသားစုက မနေ့ညကတည်းက Abscond (ဆေးရုံမှ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ မိမိသဘောဖြင့် ဆေးရုံဆင်းသွားခြင်း) သွားပြီလေ။ ဆရာနှယ့် မနေ့က ရှင်းပြရတာသာ လေကုန်ပါရောလား။စေတနာကို နားမလည်တဲ့လူနာတွေနဲ့ တွေ့ ရင် စိတ်ညစ်ရပါ့ ဆရာရယ် ”
ဆရာမရဲ့  ကရားရေလွှတ်တတွတ်တွတ် ပြောနေသော စကားသံတွေကို ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အလုံးအထည်တစ်ခု ရောက်လာသလို မွန်းကြပ်သွားမိတယ်။
“ မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ ဆရာ ” ဆိုတဲ့ တီးတိုးစကားသံလေးကိုသာ နားထဲမှာ ပဲ့တင့်သံထပ်ပြီး ကြားယောင်မိနေတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် သည်စကားသံက ခုမှ စကြားဖူးခြင်းမဟုတ်။ ဆေးရုံဆေးခန်း အဝန်းအဝိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လာခဲ့ရသမျှ တောက်လျှောက်တွင် လူနာတွေဆီမှ ဆီမန်းရွတ်သလို တတွတ်တွတ် ကြားနေခဲ့ရသော စကား။ သူတို့ရဲ့  ဘဝအတွက်တော့ သည်စကားစုလေးက သူတို့ရဲ့  သေရေးရှင်ရေးပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့  အစိုးရ သင်ကြားရေးနှင့် ကုသရေး ဆေးရုံကြီးဆိုတာကလည်း မတတ်နိုင်သူ အများစုတို့ အားကိုးအားထားရာ နေရာဖြစ်သော်လည်း.....။ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှု၊ ဆေးဝါးများ၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများမှာ အစိုးရမှ အခမဲ့ ပေးအပ်ထားသော်ငြားလည်း .... ။ ဆင်ပါးစပ် နှမ်းပက်ဆိုသလို အားလုံးအတွက်တော့ မလုံလောက် မလောက်ငှ။
သြော် ... မတူညီတဲ့ ကံတရားတွေအတွက် ဘယ်သူ့ ကိုများ အပြစ်ဖို့ရပါ့မလဲ။ မြေပြင်က အပ်တစ်စင်း ကောင်းကင်ပေါ်က အပ်တစ်စင်း တွေ့ ထိဖို့ထက်တောင် ခက်ခဲလှပါတယ်ဆိုတဲ့ လူ့ဘဝကြီးဟာ ဆုလာဒ်တစ်ပါးပေလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှကို ကဲ .. သွားလေ့ရော့ ခံလေရော့ဆိုပြီး တစ်ပွဲတစ်လမ်း အကဲစမ်းခိုင်းတဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့  ရက်စက်မှုပေလား။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာရဲ့  စေခိုင်းမှုအောက်မှာ တစ်ချို့ တွေကလည်း ကူးခတ်ဆဲ နစ်မြုပ်ဆဲ။ လူနာရှင် ပြောသွားသလို “ ဖြစ်သမျှ အရာရာ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး ” တဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် “ မတတ်သာတော့ဘူး ” ပေလား။
“ ဆရာရေ ... လုပ်ပါဦး ... ကျွန်မသားလေး တက်နေလို့ ” “ ကလေးက ထပ်အန်နေပြန်ပြီ ဆရာ ” “ ကလေးက နို့ကောင်းကောင်းမစို့ဘူး စိုးရိမ်ရလား ဆရာ ” “ အဖျားအရမ်းကြီးနေတာ ဒီနေ့ပါဆို တစ်ပတ်ပြည့် ပြီ ” “ ကလေးက ဓါတ်ဆားလည်း မဝင်ဘူး ဝမ်းတွေသွားတုန်းပဲ ဆရာ ” “ ဓါတ်ဆားထုတ်လေး ထပ်ပေးပါဦး ဆရာ ”
ပစ္စုပ္ပန်မှ နိစ္ဓဒူဝအသံများကား ကျွန်တော့်ကို လက်ရှိဘဝထဲကို ပြန်လည်ဆွဲခေါ်သွားတော့မှ အတွေးစခန်းရပ်မိတော့သည်မို့။
“ တက်နေတဲ့ ကလေးကို ဘေးတစောင်းထား လာခဲ့မယ် ”
“ ဆရာမရေ ဟိုတစ်ယောက်ကို အဖျားလေး တိုင်းပေးပါဦး ”
“ ကလေးက ချက်ချင်း ဝမ်းရပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆရာတို့ ရှင်းပြထားတယ်လေ ... သဘောပေါက်လား ... ဆရာတို့က ဝမ်းမသွားအောင် ဝမ်းပိတ်ဆေး ပေးတာ မဟုတ်ဘူးလေ ဝမ်းက တဖြည်းဖြည်းမှ ရပ်မှာလေ .. ဒီကြားထဲ သွားဦးမှာ ”
“ ဟိုကလေးအမေ ကဲရော့ ဒီမှာ ဓါတ်ဆားထုတ် ... ဝင်အောင်လည်း တိုက်ဦးနော် ”
ရုတ်ချည်းအလုပ်ရှုပ်သွားသော ဆရာဝန်ကလေးကား ဆေးရုံတွင်းရှိ လူနာကုတင်များဆီသို့ မျက်စိတဆုံးကြည့် ရင်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းမသိနိုင်သော သက်ပြင်းတို့ကိုသာ နာနာချမိလေတော့သည်။
Posted by မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂) at 12:10 PM0comments
Labels: အောက်မေ့လွမ်းမောဖွယ်ရာ ဂျူတီညများ
်အချစ်သည် ထိုကဲ့သို့လည်း .....
ညနေခင်းတစ်ချို့  အိပ်တန်းတက်တော့မယ့် အချိန်မှာ
လျှပ်စီးတချက်က ကျနော့်ကို အငိုက်မိစေခဲ့တယ်
အိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့ သားကို မျှော်နေတဲ့ အမေရဲ့  မျက်နှာထားမျိုးနဲ့
ကောင်းကင်ကြီးက ကျနော့်ကို ခပ်မှိုင်းမှိုင်း ငုံ့ ကြည့် တယ်
ဖျက်ကနဲ ကျနော့် လျှပ်စီးလေး ထွက်ပြေးသွားတယ်
အာဒံက ဧ၀ကို ပန်းသီး ခူးကျွေးခဲ့တယ်ဆိုတာ
ပန်းသီးမဟုတ်တဲ့ လက်ထဲက အရာကို သေချာကိုင်စွဲပြီး
သူမဆံနွယ်ထက်မှာ မိုးစအချို့  အစအန မပျောက်သေး
ကျနော့် လက်တဖက်အောက်မှာ သူမအကြည့် တွေက
“ ကျေးဇူးပဲ ” ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာသုံး နှုတ်ဆက်စကားနဲ့အတူ
ရှက်ပြုံးလေး တစ်ခု ကြွေကျလာတယ်
ကျနော် ရင်တွေ ခုန်မနေဘူး
ဒါပေမဲ့ လက်ထဲက ထီးကတော့
သူမအနား ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေပြေအေးက
ကျနော် ခပ်ဆဆလေး ပြုံးနေမိတယ်
Posted by မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂) at 12:20 PM3comments
နယူတန် မတွေးလိုက်မိသော အချစ်
နယူတန် မသိလိုက်တဲ့ အမှန်တရား တစ်ခု ရှိတယ်
သူမ နှလုံးသားဟာ မြေဆွဲအားကို ဆန့်ကျင်နေတယ် ဆိုတာပဲ
အချစ်ဆိုတာ ပန်းသီး တစ်လုံးမှ မဟုတ်ခဲ့တာပဲ
နယူတန် ခြွင်းချက်ထားဖို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ သီအိုရီ တစ်ခု ရှိတယ်
သက်ရောက်မှုတိုင်းအတွက် တန်ပြန် သက်ရောက်မှုဆိုတာ သူမ ဒိုင်ယာရီ ထဲမှာ မပါဘူး
အချစ်ဆိုတာ အလင်းတန်းမှ မဟုတ်ခဲ့တာပဲ
သည် ပန်းသီးကိုမှ မြည်းစမ်းနေချင်ခဲ့တာ
သည် အလင်းတန်းကိုမှ စူးစမ်းချင်နေခဲ့တာ
သူမကို ချစ်ခဲ့မိသည့်နောက် သူမရဲ့  အီကွေးရှင်းများနဲ့ သီအိုရီများကိုလဲ သင်ကြားရပေမပေါ့
မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂ )
Posted by မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂) at 12:12 PM0comments
တခါက အလွမ်း ...
အေးစိမ့်စိမ့် ဖြစ်နေတဲ့ ဆောင်းက လွမ်းလို့ကောင်းနေတယ်
အနွေးဓါတ်ကလည်း မပြယ့်တပြယ်ရယ်နဲ့ ဟိုလူကြီးကို သတိရနေတာက ဆိုးလှတယ်
အတိတ်မှာသာ အရသာရှိရင် သကြားခပ်များများထည့်  ပြီး ကော်ဖီလုပ်သောက်ချင်သေးတယ်
ပန်းတွေ ပွင့်နေလိုက်တာများ ကိုရွှေလိပ်ပြာတွေကိုတောင် မနာလိုဖြစ်လိုက်တာ
ဒင်းတို့က လေပြေညှင်းအသွဲ့ မှာ ယိမ်းတောင်နွဲ့ နေလိုက်သေးတယ်
ဆံနွယ်ထက်က နေရာလပ်ကလေးမှာတောင် သီကုံးနေကျ ပန်းတွေ မရှိတာကြာပြီပဲ
မရှိဆို ပန်ပေးသူနဲ့  အလှမ်းဝေးခဲ့တာကိုး....
ဆည်းဆာကလည်းကွယ် မှင်သက်မိအောင် တမင်ပဲ ကိုယ်ဟန်ပြခဲ့လေသလား
ခက်တာက စိတ်ကူးတစ်ချို့ က အရောင်တင်ဖို့ စုတ်ချက်မညီခဲ့ပါဘူး
ပုစွန်ဆီရောင် သမ်းနေတဲ့ ရေပြင်ကျယ်ကတော့ လက်ယပ်ပြီး ခေါ်နေလေရဲ့ 
မလာချင်သေးဘူး ဒီမှာ အရောင်ခြယ်နေတုန်းမို့လို့.........
မက်နေကျ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ .......
ပန်းချီဆွဲနေတဲ့ ပီကာဆိုရယ် ရှိတယ်
Posted by မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂) at 11:50 AM 1 comments
တောင်သာမြို့ သို့ field trip ဆင်းခြင်း ( အပိုင်း - ၁ )
တနေ့တခြား အသက်တွေ တဖြည်းဖြည်း ကြီးကြီးလာတဲ့နောက် သက္ကရာဇ်တိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ အမှတ်တရဆိုတဲ့ ခြေရာလေးတွေ ချန်လေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။အတိတ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ ပြန်လိုချင်လို့ မရတော့တဲ့ အရာဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့ စိတ်ရှိတိုင်း တမ်းတမ်းတတ တူးဖော်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အမှတ်တရဆိုလည်း မမှားဘူးမလား။
ဆိုးဝါးခဲ့တဲ့ အတိတ်ခါးခါးတွေကို မေ့ပျောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း သာယာကြည်နူး ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ်လှလှလေးတွေဆီကိုတော့ ကျွန်မ ခဏခဏ အလည်ရောက်ဖြစ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် ခုနှစ်အားဖြင့် ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းလောက်မှာ ကျွန်မတို့ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း (ခ) ကျောင်းသူတွေ တောလက် ကျေးရွာ မြို့နယ် ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း လို့ အမည်ရတဲ့ field trip ကို သွားခဲ့ကြတယ်။
ပျော်စရာသိပ်ကောင်းတဲ့ စာကျက်စရာ အပူအပင်တွေကလွဲရင် သိပ်ကိုလွတ်လပ်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ရဲ့  အရိပ်တွေထဲမှာ ဒီ field trip လေးကလည်း ကျွန်မအတွက် မမေ့နိုင်တဲ့ ခဏခဏ လှန်လှောကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဘ၀စာမျက်နှာလေးတစ်ခုပေါ့
အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသား ၁၃ ယောက် မှ ၁၅ ယောက်ထိ ခွင့်ပြုထားတယ် ။ Preventive and Social Medicine - PSM လို့ခေါ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လူမှုရေး ဆေးပညာ ဘာသာရပ်က လွှတ်တဲ့ field trip ပါ။ ခရီးတိုတစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်ကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့  မျက်နှာလေးတွေမှာ ပျော်ရွှင်စရာအတိ စိတ်ညစ်စရာဆိုလို့ မြူတစ်မှုန်တောင် ရှာမတွေ့ တဲ့အချိန်။ အင်္ကျီဆင်တူလေးတွေအတွက် အော်ဒါကြိုမှာကြ၊ ချုပ်ဝတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသူတွေကတော့ အပ်ချူပ်ဆိုင်တွေမှာ ပြူတစ်ပြူတစ်သွားလုပ်ကြ၊ အီးစီလို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှာ ဖွဲ့ ကြ ဓါတ်ပုံတွေ တူတူ ရိုက်ကြနဲ့ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချိန်လေးတွေ။
သွားဖို့ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်အလိုမှာ ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ရဲ့  ၀င်းတစ်ခုလုံး ပြာပြာနီနီ ညိုညိုရီရီ ၀ါဝါစိမ်းစိမ်း ယိမ်းမောင်နှံတွေလို အရောင်တွေစုံစီိလို့ အလှပေါ်အယဉ်ဆင့်နဲ့ အရောင်တွေပြိုင်နေကြတဲ့ ပန်းပွင့်များပမာ ပန်းခင်းကြီးတစ်ခင်းလိုပါပဲ။
အနီရောင်နဲ့ တစ်မျိုး လှနေတဲ့ ကိုကိုမမတွေကို တခြားအဖွဲ့ များက “ နွားရိုင်းသွင်းချိန် အဝှေ့ ခံရမယ် ” ဟူ၍တစ်မျိုး အ၀ါရောင်နဲ့ စတိုင်ကြွယ်နေတဲ့ မမတွေကို “ သချိုင်းစောင့် မဖဲဝါတို့ ယိမ်း ” ဟူ၍ တစ်ဖုံ အချင်းချင်း စနောက်ကြဖြင့် တ၀ါးဝါး ပွဲကျခဲ့သော အချိန်များ။ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ ရဲ့  ၀တ်စုံအရောင်ကတော့ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်တဲ့ ကျွန်မရဲ့  အများကြားမှာ ထင်ပေါ်စေလိုတဲ့ အကြံပေးချက်အရ အပေါ်ကပုံမှာပါတဲ့ လိမ္မော်ရောင် တောက်တောက်လေးတွေနဲ့ ပေါ့။ အဲဒီတော့ “ စီပီက စပွန်ဆာတွေ ” ဟူ၍ တစ်သွယ် “ စည်ပင်က ၀န်ထမ်းတွေ ” ဆိုပြီး တစ်မျိုးနဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ထာပနာပြုကြပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆင်တူဝတ်စုံကိုယ်စီနဲ့ အဲဒီနေ့က စာသင်ခန်း ၇ ( theater7) မှာ ကိုယ်သွားရမယ့် မြို့ ကို မဲနှိုက်ကြပါတော့တယ်။ အားလုံးရဲ့  စိတ်ကူးတွေ ဆုတောင်းတွေ အတွေးတွေထဲမှာတော့ ရန်ကုန်နဲ့ ဝေးရာကို ကျချင်တဲ့ စိတ်တွေ ကိုယ်စီနဲ့။ မဲနှိုက်လို့ ဥပမာ ရေတာရှည်မြို့ ဆိုရင် ရန်ကုန်နဲ့ အရမ်းနီးတော့ လမ်းခရီးက သိပ်ရင်ခုန်ဖွယ် မရှိဘူးပေါ့ရှင်။ ဥပမာ မန္တလေးတိုင်းဘက်က မြို့ တွေဘက် ကျရင်တော့ ဟေးခနဲ ထအော်ကြ ပြုံးပျော်ကြပေါ့။ အဖွဲ့ ရဲ့  အီးစီက မဲနှိုက်ရပါတယ် အဲဒီနောက်မှာမှ မဲလိပ်ကလေးကို ဖြေပြီး ဆရာဆရာမတွေကို ပြကြပြီး ကြေငြာကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ ကတော့ မန္တလေးတိုင်းရဲ့  နယ်မြို့တစ်မြို့  ဖြစ်တဲ့ “ တောင်သာ “ ဆိုတဲ့ မြို့ လေးကို သွားရပါတယ်။ တောင်သာမြို့ လေးဟာ မြင်းခြံနဲ့ မိတ္ထီလာမြို့  ရဲ့  ကြားမှာ ရှိပြီး မန္တလေးမြို့ နဲ့လည်း နီးတဲ့ မြို့သေးသေးလေး တစ်မြို့ ပေါ့။ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ တောင်သာမြို့ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးဆီကို Express ကားကြီးရပ်တဲ့ မြို့လယ် နာရီစင်ကနေ ကျွန်မတို့ မြင်းလှည်းလေးနဲ့ လာခဲ့ရတယ်။
ဆေးရုံရဲ့  အဆောင်လွတ် နှစ်ခုမှာ ကျွန်မတို့ ယောက်ျားလေးတစ်စု မိန်းကလေးတစ်စု နေရတယ်။ အဲဒီနောက်နေ့တွေမှာ ဆေးရုံရဲ့  အစည်းအဝေးတွေ အဲဒီမြို့ လေးကတဆင့် သွားရမယ့် ကျေးလက်ရွာလေးတွေ အကြောင်း ပြောကြ ဆွေးနွေးကြ၊ ရွာသူရွာသားတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတဲ့ ဆေးဝါးတွေအကြောင်း စသဖြင့် တိုင်ပင်ကြရင်း TMO - Township Medical Officer လို့ခေါ်တဲ့ တောင်သာဆေးရုံရဲ့  ဆရာဝန်မကြီးနဲ့လည်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီနောက် မြို့ ရဲ့  မီးသတ်၊ စည်ပင်၊ မြို့ ဈေး အစရှိတဲ့ နေရာတွေကို သွားကြပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ အမှိုက်နဲ့ ကျန်းမာရေး၊ မြို့ နေလူထုဘ၀ တိုးမြင့်ရေး အစရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး ဟောပြောပွဲများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။
Posted by မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂) at 1:47 AM4comments
Labels: အမှတ်တရများသို့ တခေါက်
ဝေးကွာမှုတွေ အနားသတ်ထားတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်က ပြန်လာဖို့ နင် ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ် ဆို ...
တွေ့ ဆုံကြုံကွဲ ပါလို့ ခုတော့ နင် တွေးတတ်သွားခဲ့ ပြီးပေါ့
တကယ်ချစ်တာပါ ဆိုတဲ့ နင်ပြောတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဟာ ... အခြေအမြစ်မဲ့တဲ့ ကောလဟာလ တစ်ခုသာသာပဲလား ...
အလွဲတကာ့ အလွဲတွေ ထဲမှာ ငါတို့နှစ်ယောက် လွဲခဲ့ရတာ အဆိုးဆုံးဆို ...
တစ်ချို့  အလွဲတွေကို နင် တည့်ဖို့ မကြိုးစားတော့ဘူးပေါ့
ငှက်တွေ အတောင်တစ်ဖက်နဲ့ ပျံတဲ့ နင့် ပုံပြင်ထဲမှာ ငါက ရှင်ရက်နဲ့သေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲလား ...
ဘယ်လောက်ကြာကြာ လွမ်းရမယ်မှန်းမသိတဲ့ ရာသီတွေကို နင် နာကျည်းခဲ့တယ်ဆို ...
နွေမိုးဆောင်းဆိုတာ အမြဲသံသရာလည်နေမှာပဲလို့ နင် မြင်တတ်သွားပြီပေါ့
နင် လက်ပြနေတဲ့ တောင်စွယ်က နေအကွယ်မှာ ငါဇာတ်သိမ်းရမှာပဲလား ...
အရုပ်ကြိုးပျက်တဲ့ထိ က ခဲ့ရတဲ့ ရုပ်သေးက ငါ ပါ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Congratulations!!! ရွှေစင်ဆု ရအောင် နင် တော်လွန်းခဲ့လို့
Posted by မြရိပ်ဇင် (ဆေး-၂) at 10:50 PM4comments